ဖွေးဥနုနေတဲ့ အတွင်းသား လေးတွေနဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….. – Shwe Naung
ဖွေးဥနုနေတဲ့ အတွင်းသား လေးတွေနဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………..
N N | May 7, 2022 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ် ကြီးရေ.. ပုရိသ ပရိသတ် တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေး ချစ်ခင်မှု တွေကို အများဆုံးနဲ့ အခိုင်အမာ ဆုံး ရရှိ ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်လ်ဒယ် မင်းသမီးချောလေး တွေထဲမှာ ရစ် လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ကလည်း အပါ အဝင် ပါပဲ နော်။
ညို့အား ပြင်းပြီး အချိုးအစား ကျတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အသည်း ယားစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေနဲ့လည်း ဖမ်းစား တတ်တဲ့ ရစ်ရစ် ကတော့ တကယ်ကို ဆိုးနွဲ့တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော်။
သူမရဲ့ မခို့တရို့ ဟန်ပန် ပုံရိပ်လေး တွေကို အမြဲ မျှဝေ လေ့ရှိတဲ့ ရစ်ရစ် ကတော့ အခု တစ်ခါ မှာလည်း အချိုးအစား ကျလွန်းတဲ့
ကောက်ကြောင်း တွေကို အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ အမိုက်စား ပို့စ်ပေး ဓာတ်ဖမ်း ထားတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ အချစ်ပိုစေ ပြန်ပါ တယ်နော်။
ဂီတာ ရှိတ်လေးလို အချိုးအစား ကျလွန်းတဲ့ အဖုအထစ် ကောက်ကြောင်း တွေက မြင်သူ ပုရိသတွေ တိုင်းကို ရင်ဖို လှိုက်မောဖွယ် ညို့အား ပြင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကတော့ တကယ်ကို စွဲမက်စရာ ကောင်းလွန်း ပါတယ် နော်။
“ခုတလော အရမ်းတွေ လှချင်လာတာ မင်းကြောင့် များလား??❤️..” ဆိုပြီး ကျော့ရှင်း တဲ့ အလှ တရားတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင် နေပြီး မြင်သူ တိုင်းကို အသည်းယားအောင် အချစ် ပိုစေတဲ့ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ဝေမျှ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် နော်။
အဲ့ဒီ ပိုစ့်ရဲ့ အောက်မှာတော့ ပုရိသ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် ကြတဲ့ Comment လေးတွေ အပြင် မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေကပါ သဘောကျစွာ ချစ်ခင် အားပေးနေကြတာကိုလည်း မြင်တွေ့ ရပါတယ် နော်။
ပြည့်တင်းလှတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေး ရအောင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို‌လေး……….
အကိတ်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ ဆော့ကစား ထားတဲ့ မေပန်းချီရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………..